Wararka Maanta: Isniin, Oct 1 , 2012-Hay'adda Nabadsugidda Gobolka Banaadir oo sheegtay in hadda la isku halleyn karo Ammaanka Magaalada Muqdisho
Col. Ereg oo maanta saxaafadda kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in afar ruux oo ka tirsan Al-shabaab ay qabteen xalay iyagoo dagaalamaya, isagoo sheegay in la marsiin doono sharciga, wuxuuna hadalkiisa raaciyay in ammaanka Muqdisho la isku halleyn karo xilligan.
"Ammaanka Muqdisho waa mid la isku halleyn karo xilligan, waayo howlo badan ayay ciidamadu sameeyeen kuwaasoo lagu soo qabqabtay xubno badan oo Al-shabaab ka tirsan," ayuu Col. Ereg oo sheegay in xubnahaas lasoo taagi doono maxkamad.
Taliyuhu wuxuu soo bandhigay afar wiil oo dhalinyaro ah kuwaasoo uu sheegay in lagu soo qabtay xalay howgal ay ciidamadu sameeyeen, isagoo xusay in la qabtay iyagoo dagaalamaya ayna caddaan tahay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Hadalka Col. Ereg ayaa imaanaya iyadoo bishii hore ay qaraxyo iyo dilal qorsheysan ay ka dhaceen Muqdisho, kuwaasoo ay naftooda ku waayeen in ku dhow 50-qof oo ay ku jireen suxufiyiin ka howgalayay warbaahinta Muqdisho qaarkeed.
Qaraxyadii ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa midkooda lagu weeraray hoteel uu deggenaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo ay ku dhinteen sagaal qof oo ay ku jireen ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda.